Diyaaradii loo diray Mukhtaar roobow oo ka soo duushay xudur -
Diyaaradii loo diray Mukhtaar roobow oo ka soo duushay xudur
Diyaaradii Muqdisho ay ka direen Dowladda federaalka soomaaliya ayaa hada ka soo duushay Degmada Xudur ee xarunta Gobolka Bakool waxayna ku soo wajahan tahay Garoonka Diyaaradaha ee Muqdisho.
Waxaa diyaaradaas saaran Wasiirka gaashaan dhiga Soomaaliya Cabdi rashiid Cabdulaahi maxamed,Taliye ku xigeenka hay,ada nabad sugida iyo sirdoonka soomaaliya Cabdalla Cabdalla,Wasiirka Amniga Maamulka koonfur Galbeed ee somaaliya Xasan xuseen Maxamed Xasan eelay iyo Mukhtaar Roobow Cali.
ka hor inta aan laga soo qaadin Xudur waxaa shir weyn uu ka dhacay Xudur waxaana shirkaas kuwada kulmay Mukhtaar roobow,wasiirka gaashaan dhiga,wasiirka amniga Maamulka koonfur galbeed,Taliye ku xigeenka Hay`ada nabad sugida iyo surdoonka soomaaliya iyo saraakiil itoobiyaan ah.
Dhanka Madaxda sare ee soomaliya waxaa qadka taleefoonka shirkaas kaga qeeb galay Ra`iisul wasaaraha Xukuumada federaalka soomalaiya iyo Gudoomiyaha baarlamanka soomaliya.
Mukhtaar ayaa waxaa uu markii hore diiday in loo soo qaado xamar laakiin markii danbe waxaa muuqata in laga dhaadhiciyay.
Deg Deg Diyaaradii waday Mukhtaar roobow oo soo caga dhigatay Garoonka Diyaaradaha Ee Muqdisho